Iibsashada tigidhada bakhtiyaanasiibka ma xaaraan baa Islaamka? - Naadiga Muslimka
Tigidh weyni ma xaaraan baa?
Ku guuleysiga lacagtu ma xaaraan baa?
Islaamku sawir-gacmeedku ma xaaraan baa?
Ganacsigu ma xaaraan baa mise waa xalaal?
Tigidh weyn ma runbaa?
KBC ma xalaal baa?
Ma xaaraan baa in la galo Enteraways?
Nolosha Gacha Xaaraan ma tahay?
Indho in la sawiro ma xaaraan baa?
Ma xaaraan baa in gurigaaga sawiro lagu sudho?
Muslimiintu wax sawiri karaan?
Maalgalintu ma xalaal baa?
Maalgelinta Bitcoin ma xaaraan baa?
Dalxiisku ma xaaraan baa Islaamka?
Tikidhada Bakhtiyaa-nasiibka (halkaas oo aad lacag ku bixinayso si aad u hesho tigidh oo laga yaabo ama laga yaabo inaad ku guulaysato) waa mamnuuc diinta Islaamka, Muslimiinta oo dhamina way isku raacsan yihiin arrintan sababtoo ah waa nooc khamaar ah, dhammaan khamaarkana waa ka mamnuuc diinta Islaamka.
Qaar badan ayaa abaalmarinta ku calaamadiyay nooc khamaar ah sidaas darteed haram. Nin Sacuudiyaan ah oo safar ku joogay Dubai ayaa ku guuleystay hal milyan oo dollar isagoo Imaaraadka Carabta u soo marsiiyay barbaro lacag la’aan ah Millennium Millionaire. Sida laga soo xigtay Arab Business, ku guulaysta, Mohammad Al Hajeri, ayaa iibsaday tikidhka guusha ee internetka horaantii May.
Nooc kasta oo khamaarka / ciyaaraha fursada / bakhtiyaanasiibka / bingos / raffles iwm. dhammaan xaaraanta, macnaheedu waa in lacag kasta oo lagu guuleysto ay tahay xaaraan. Haddii aad lacag ku kasbato kartidaada maskaxeed iyo tan jidheed ee kaa hor imanaysa tartan kale, lacagtaadu waa xalaal.
Haa, sawir-qaadiddu waa mamnuuc diinta Islaamka sida uu Nebi Muxamed (scw) u sheegay in fanaanku uu wajihi doono cadaab daran maalinta qiyaame taasina ay tahay kaliya sawirida abuurka Eebe.
saamiyadu ma xalaal baa mise waa xaaraan? Kaydka ayaa ah shirkad aan la macaamilin badeecad/adeeg xaaraan ah. … Iibka, haysashada iyo iibinta saamiyada xalaal ah waa bannaan tahay Islaamka.
WAA XIISO: Islaamku ma ogolyahay Botox?
Ku sawir macaamiisha leh bandhigyo Flash aad u horumarsan; Ku raaxayso maktabad weyn oo leh kheyraad badan oo aad isticmaali karto si aad u hubiso inaad la kulanto guul. Iyada oo ku saleysan cilmi baaristayda, waxaan dareemayaa in Tigidhka Weyn ee Hantida uu yahay heshiiska dhabta ah iyo waa fursad sharci ah oo qiimo dhab ah leh.
Wadaada Muslimiinta ayaa soo saaray fatwo ay ku taageerayaan Kaun Banega Crorepati, Sawaal Dus Crore Ka iyo ciyaar la mid ah taasi oo u balan qaaday ka qeyb galayaasha. … Waxay ku heshiiyeen in nasiibku uu door yar ka ciyaaray taxanaha KBC ama SDCK laakiin waligiis ilaa xad la samaynayo 'fursad' qodobka keliya.
Haddii by giveaway waxaad ula jeedaa hadiyadaha ay xarumaha wax iibsiga u gudbiyaan macaamiisha ka soo iibsada alaab badan iyo alaabooyin kale oo bakhaaradooda ah, si fiican, maahan. Haram. Waxay ku qeexeen hadiyaddooda xaalad gaar ah iyo in ay iibsanayaan qadar gaar ah oo alaab ah.
In kasta oo ay tahay Ugaadha lafteedu maaha Xalaal iyo Xaram midna sida ay noloshu midna u ahayn sida ay had iyo jeer ku siinayso doorashada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorato inaad ciyaarta u ciyaarto si xalaal ah, hubaal inaadan aad u fogaan doonin.
Haddaba, gunaanadkii. In indhaha lagu sawiro ma bannaana Islaamka sidaas darteed waxa loo aqoonsan karo in uu yahay marka sawirku uusan ku jirin indhaha, sanka, afka iyo xataa faraha, maadaama uusan ahayn sawir dhammaystiran, sidaas darteedna uusan ku dayanayn abuurka Eebbe.
WAA XIISO: Waa maxay sayid Islaamku?
Waxaa si fiican u sugnaaday axaadiithta saxda ah in Malaa'igtu aysan galin guri ay ku jiraan sawirro noole ah. In la laadlaado sawirada noolaha waa mamnuuc. Dhib malahan in sawirada loo qaatay wax la caabudo iyo in kale. Saamayntu wali waa sidii hore.
In Islam, inkastoo aysan jirin wax Quraanka kariimka ah oo si cad u mamnuucaya sawirada, qaar ka mid ah xadiisyada dheeriga ah ayaa si cad u mamnuucaya sawir sawirada xayawaan kasta; xadiisyada kale waxay u dulqaadan karaan sawirada, laakiin marnaba ha dhiirigelin. Sidaa darteed, inta badan Muslimiinta Ka fogow sawir-gacmeedka Muxammad ama nabi kale sida Muuse ama Ibraahim.
Iibsashada saamiyadu ma xalaal baa? Guud ahaan waa la aqbalay in iibsashada saamiyadu aanay ahayn xaaraan. Tani waa sababta oo ah waxaad si fudud u leedahay boqolkiiba ganacsiga. … Shirkadaha gaadiidka, tusaale ahaan, waxa ay haystaan ​​xisaabo bangi oo dulsaar ku salaysan waxaana inta badan lagu maalgeliyaa deymo ribadu ku salaysan yihiin, ama shakhsiyaad saamiyo ah.
Waxay u muuqataa Bitcoin iyo inta badan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' inta badan waa xalaal sida ay qabaan culimada Islaamku si kastaba ha ahaatee halkaas ma aha hagitaan rasmi ah ilaa hadda. Waxaa jira shuruudo dhowr ah oo ay tahay in shakhsiyaadka ay ku dhaqmaan, si loo hubiyo in maalgashigooda ama dakhliga kale loo arko xalaal.
Dhammaan noocyada hawlaha dalxiiska waa la oggol yahay ilaa inta ay khusayso ujeedada socdaalka ma khilaafsana shareecada islaamka kuwaas oo waxyeelo u geysta dalxiiska iyo bulshada sida dalxiiska galmada, daroogooyinka, khamriga iyo dhilleysiga (Shakiry, 2006).
Muxuu quraanku u xusay khamriga?
Quraanku miyuu xusay khamriga? Muslimiinta runtii waa loo ogolyahay inay cabbaan. Khamrigu waa xitaa
Sidee u Tukataa Salaadda sida Nabi Muxamed?
Sideed u gudataa salaada sunnada ah? Ka dib markii uu u sujuuday mid / kow si qumman oo deggan,
Su'aal: Ensaymes-ka khudaartu ma xalaal baa?
Ensaymesku ma xalaal baa? Halka, ensaymes-ka ka soo jeeda microorganisms inta lagu jiro halsano ayaa loo arkaa inay yihiin
Waa maxay OCD Islaamku?
Khalkhalka waswaaska ah ee dhaxalka islaamka. Inta badan culimadii hore ee Islaamku waxay xidhiidhiyeen kiisaska intooda badan
Jawaab degdeg ah: Cunnada carruurtu ma xalaal baa?
Waa maxay cuntada ilmuhu xalaal yahay? 'Caasha' waa cuntada ugu horreysa ee xalaasha ah ee carruurta adduunka
Su'aasha soo noqnoqda: Baararka Mars ma la shahaado xalaal ah?
Shukulaatada xalaasha ah waa maxay? Xalaal Database UK Magaca Alaabta Magaca Shirkadda Xalaal /
Jawaabta ugu fiican: Maxaan u isticmaali karaa xijaab ahaan?
Ciiddu ma noqon kartaa maalmo kala duwan?
Immisa lamaane ayaa ku jira Quraanka kariimka ah?
Waa maxay oraahda u wanaagsan Ramadaanka?
Sideen ugu duceeyaa Islaamka si ka wanaagsan?
Alle ma ina maqlaa?
Su'aasha soo noqnoqda: Muusigga murugada leh ma xaaraan baa?